राहतको रमिता : आखिर राहत वितरण गर्दा यस्तो सकस किन ? « Salyan Today
राहतको रमिता : आखिर राहत वितरण गर्दा यस्तो सकस किन ?
सल्यान ९, बैशाख ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिनको लागी सरकारले रोकथाका लागी बिभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार यस कार्यमा कटिबद्ध भएर लागेका छन् । यसैक्रममा सरकारले गत चैत ११ गते देखी देशब्यापी लकडाउन शुरु ग¥यो ।
यसबिचमा अहिले ‘हुने खाने वर्ग’ र ‘हुँदा खाने वर्ग’ बीच स्पष्ट विभाजन रेखा कोरिएको छ । हुनेखाने वर्गका मानिसहरु होम क्वारेन्टाइनमा बसेर थरिथरि परिकार ‘ट्राइ’ गरिरहेका छन् र, त्यसको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेर आफ्नो ‘औकात’ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हुँदा खाने वर्गचाहिँ दैनिक गुजाराका लागि राहत माग्न अनेक ठाउँ हात फैलाइरहेका छन् ।
यस्तो अबस्थामा सरकारले स्थानीय तहमार्फत विपन्न परिवारहरुको छनोट गरि राहत बाँड्ने रणनीति लिएको छ । केही स्थानिय तह तथा विभिन्न संघ–संथा र व्यक्तिले राहत बाँडिरहेका छन् । अहिलको अबस्थामा राहत बितरण चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । एकातीर राहत बाँड्नु छ, अर्को तीर सामाजिक दुरी कायम गर्नु छ ।
फेरी अहिलेको अबस्थामा हामीले राहत वितरण गरेका छौँ भन्ने प्रमाण देखाउन पनि त्यसको फोटो पनि खिच्नैप¥यो । अहिले राहत वितरण गरिएका थुपै्र तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सेयर भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका केही तस्वीर हामीले संकलन गरेर यहाँ राखेका छौँ ।